Nazra – Tetikasa Firesahana ireo lohahevitra fady · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jona 2019 17:58 GMT
Jereo eo amin'ny sarintany lehibe kokoa ny Exploring Taboos
Matetika lohahevitra voaràra any Egypta ny lohahevitra momba ny fitoviana eo amin'ny lahy sy ny vavy, ny fimaroana ara-pananahana, ny fifandraisana sahaza eo amin'ny lahy sy vavy ary ireo lohahevitra mifandraika amin'izany . Maro ireo mihevitra fa tokony resahana amin'ny mangingina ireo lohahevitra ireo, raha tsy izany tsy resahana mihitsy. Na izany aza, manana ny lanjany izany lohahevitra izany ho an'ny Egyptiana sasany, izay mihevitra fa ilaina ny miresaka izany lohahevitra izany, satria mahakasika ny fiainany andavanandro. Mikasa hanome toerana azo antoka ho an'ny vehivavy sy lehilahy mba hifanakolazana ireo lohahevitra ireo i Mozn Hassan, Doaa Abdelaal, Ramy Raoof, Fatma Emam ary Bassam Mortada, ekipa mpikambana ao amin'ny vondrona Nazra. Ho azy ireo, tsy misy toerana azo antoka kokoa hiresahana malalaka sy am-pahatsorana ireo lohahevitra ireo afa tsy amin'ny fampiasana bilaogy sy dinika (forum) antserasera.
Hitarika ny tetikasa Tankeeb fil Tabohaat, izay midika hoe ” Fanavatsavana ny fady” ny ekipa, amin'ny alàlan'ny fikarakarana andiana adihevitra hamantarana ireo Egyptiana maniry ny hanoratra momba ireo lohahevitra ireo ao amin'ny sehatra an-tserasera. Amin'ny alàlan'ny fanampiana sy ny fanohanan'ireo bilaogera Egyptiana efa za-draharaha, dia hampianatra ireo Egyptiana mikasika ny fomba fanehoana ny eritreritr'izy ireo sy ny fihetseham-pon'izy ireo momba izany lohahevitra izany ireo mpikambana ao amin'ny Nazra ary hikarakara fifanakalozan-kevitra lehibe miaraka amin'ny hafa no sady hitazona ny fiainana antakonan'izy ireo raha ilaina.
Ny fanantenana dia ny hisokafan'ny varavarana ho an'ny hafa avy amin'ny fiarahamonina Egyptiana izany fifanakalozan-kevitra izany mba handraisan'izy ireo anjara amin'ny fifanakalozan-kevitra ary hampihena ny fanilikiliana amin'ny firesahana ireo lohahevitra ireo amin'ny hafa, ary koa hanome sehatra azo antoka mba hizarana traikefa sy fahalalana momba ireo lohahevitra ireo.
Lahatsoratra farany avy amin'ny tetikasa “Breaking Taboos”
Nazra – Rising Voices
20 Avrily 2011
13 Novambra 2010
30 Septambra 2010
Tranonkalan'ny Tetikasa: Ho avy tsy ho ela
Bilaogy tetikasa: Nazra – Exploring Taboos RSS